विचल्लीमा ९० नेपाली, तपाईका आफन्त त परेनन् ? - Arthatantra.com
विचल्लीमा ९० नेपाली, तपाईका आफन्त त परेनन् ?
साउदी अरब । सम्झौताअनुसार काम र सेवा सुविधा नपाउँदा यहाँ आएका ८७ जना नेपाली कामदार बिचल्लीमा परेका छन् ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित ‘एसिई इम्प्लोयमेन्ट ब्यूरो प्रालि’ म्यानपावर कम्पनीमार्फत चार महिनाअघि साउदीको रियादमा रहेको ‘अलजिसेर अल अमल’कम्पनीमा आएका नेपाली कामदारहरू बिचल्लीमा परेका हुन् । सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्दा उल्टै कम्पनीले विभिन्न किसिमका धम्की दिने गरेको पीडितले बताएका छन् ।
जुस उत्पादक कम्पनी भएकाले राम्रो कमाई हुने प्रलोभनमा पारेर ती कामदारलाई साउदी पठाइएको भए पनि अहिले उनीहरू बेरोजगार बनेका छन् । कमाइ नभएपछि उनीहरूलाई खानबस्न समेत मुश्किल भइरहेको छ ।
“सम्झौताअनुसार काम र तलब देउ, हैन भने स्वदेश फिर्ता पठाईदेउ भन्दा कम्पनीले सुनवाई गरेको छैन” बर्दियाका कर्णबहादुर शाहीले भन्नुभयो । नेपाली कामदारलाई सो कम्पनीले विभिन्न किकिमका धम्की दिने गरेको पीडितको भनाइ छ ।
म्यानपावर कम्पनीले उनीहरूलाई मासिक एकहजार ३०० साउदी रियाल कमाई हुने आश्वासन दिएको भए पनि हालसम्म ७०० रियाल मात्र पाएको पीडित कामदारले बताएका छन् । कामदारबाट कम्पनीले झुटो आश्वासन दिएर प्रतिव्यक्ति रु एक लाखदेखि रु एकलाख ३० हजारसम्म रकम असुलेको सप्तरीका दीपेन्द्र चौधरीले बताउनुभयो ।
“तीन महिनादेखि काम गर्न पाएका छैनौँ, स्वदेश फर्कन्छु भन्दा उल्टै कुटपिट गर्ने गरेका छन्” उहाँले भन्नुभयो । स्वदेश फर्कनका लगि २० हजार साउदी रियाल तिर्नुपर्ने अन्यथा स्वदेश फर्कन नदिने धम्की दिएको पीडित चौधरी बताउनुहुन्छ ।
कम्पनीले हालसम्म आवास अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराउँदा नेपाली कामदारहरू गैरकानुनी रुपमा बस्न बाध्य छन् । “आवास अनुमतिपत्र नबनेकै कारण बीमासमेत हुन नसक्दा औषधि उपचारबाट वञ्चित छौँ” दाङ, तुलसीपुरका ताराप्रसाद चौधरीले भन्नुभयो ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ साउदीका अध्यक्ष नारायण पासवान पीडित नेपाली कामदारको उद्धारका लागि दूतावासलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । सरकारले खाडी मुलुक आउने कामदारका लागि ‘फ्रि भिसा फ्र टिकट’ लागू भएको जनाए पनि यहाँ आउने नेपाली कामदार भने लाखौँं रुपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । उनीस्हरूले भनेअनुसारको काम र सेवा सुविधा पाउन नसक्दा थप समस्या झेल्नु परेको छ ।
१९ चैत २०७२, ८.००
वि.सं.२०७२ चैत १९ शुक्रवार १२:५९ मा प्रकाशित
अघिल्लाे युरोपियन बजारमा नेपाली जडीबुटीको माग बढ्दो !
पछिल्लाे सहकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको दोहोरी !
पहिलो पटक अन्टार्टिकामा सफलापूर्वक अवतर‍ण गर्‍यो विमान
वि.सं.२०७८ मंसिर १४ मंगलवार १३:४७
एजेन्सी । इतिहासमा पहिलो पटक अन्टार्टिकामा एउटा विमानले सफलापूर्वक अवतरण...
५० वर्षमा यसरी, शून्यबाट विश्वकै वित्तिय गन्तव्य बन्यो दुबइ
वि.सं.२०७८ मंसिर १४ मंगलवार १२:४१
एजेन्सी । युनाईटेड अरब इमिरेट्सको स्थापना दिवशको अवसरमा ५० वर्षअघि...
वि.सं.२०७८ मंसिर १४ मंगलवार १०:४९
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य सगंठन (डब्लूचओ) ले कोभिड भाइरसको नयाँ...
कोभिड अस्पतालमा महिलाले लगाइन् आगो
वि.सं.२०७८ मंसिर १४ मंगलवार १०:४२
एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा कोभिडका विरामीलाइ राख्ने अस्पतालमा अ‍ागो लागेपछि एक...
वि.सं.२०७८ मंसिर १३ सोमवार १४:३१
एजेन्सी । बेलायतमा सम्पूर्ण वयस्कलाइ कोभिडविरुद्धको खोप दिइने भएको छ...
वि.सं.२०७८ मंसिर १३ सोमवार १३:२३
एजेन्सी । प्रसूति व्यथा लागेका महिलाहरु सामान्यतया केही दिनदेखि अस्पतालमा...